Mkpụrụ Akwụkwọ Mmụta Mmụta - Ụlọ akwụkwọ asụsụ na Canada
Bouchereau Lingua International (BLI) gbara mbọ ime ihe niile dị mkpa iji hụ na ụmụ akwụkwọ nwere ohere iji mezue ihe omume ha. N'ime usoro a n'ozuzu ya, a na-emeso ụmụ akwụkwọ niile ihe n'ụzọ ziri ezi na nha anya. Ụmụ akwụkwọ ndị na-akwadoghị ihe mgbaru ọsọ na agụmakwụkwọ nke BLI maka onwe ha na ụmụ akwụkwọ ibe ha nwere ike ịdabere na ntaramahụhụ, ruo na gụnyere nchụpụ. N'ozuzu, BLI ga-anwa igbanwe ọnọdụ na-enweghị ịchụpụ ya. Ịdọ aka ná ntị nkịtị, ịdọ aka ná ntị na nkwusioru nwere ike ịmalite omume ikpeazụ na nke kachasị njọ. Mgbe BLI chere na iguzosi ike n'ezi ihe, nchedo ma ọ bụ ọdịmma nke ụmụ akwụkwọ ya, ndị ọrụ, ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọbịa ndị ọzọ nọ n'ihe ize ndụ, mgbe ahụ, a ga-enwe ike ịchụpụ ya na nlezianya nke ụlọ akwụkwọ n'oge ọ bụla.
Ọmụmụ Ihe Emeghị Ihe n'Eziokwu
Okwu ọ bụla, omume ma ọ bụ ọrụ rụrụ naanị, ma ọ bụ ndị ọzọ maka ntụgharị uche kpọmkwem ma ọ bụ na-adịghị na-enye gị ohere na-ezighị ezi ma ọ bụ na-abara onwe gị ma ọ bụ onye ọzọ na-amụrụ ihe (s) uru gụnyere:
ịghọ aghụghọ ule / plagiarism
mgbanwe nke ndekọ
ezighị ezi / ụgha
Ọnụ ndị mara mma
Enweghi ike ịkwụ ụgwọ na-enweghị atụ n'ihi BLI n'ime oge a kapịrị ọnụ nwere ike ịbụ ihe kpatara ya nchụpụ mgbe e nyechara ịdọ aka ná ntị aka.
Iwu BLI banyere ọgwụ ike na mmanya:
A machibidoro ịṅụ ọgwụ ọjọọ na mmanya na ụlọ akwụkwọ.
A naghị ekwe ka ịṅụ mmanya na ụlọ akwụkwọ, ihe omume ụlọ akwụkwọ, ọrụ ma ọ bụ njem na njem ọ bụla, ma ọ bụ ndị ọrụ ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ.
Onye ọ bụla na-adịghị akwụkwọ / obere ụmụ akwụkwọ nwere, na-eji, na-ere ma ọ bụ na-ekesa iwu (dịka wii wii, ọgwụ ọgwụ ọgwụ, wdg) ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ, ọgwụ nri, mmanya ma ọ bụ ụtaba mgbe ọ bụla n'ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụ n'okpuru ikike nke ụlọ akwụkwọ ahụ , na-edo onwe ya n'okpuru ntaramahụhụ kasị njọ, gụnyere nkwụsịtụ ma ọ bụ nchụpụ.
Atụmatụ ụlọ akwụkwọ ahụ banyere ọgwụ ọjọọ na ịṅụ mmanya na-etinyekwa aka na njem niile na ihe omume. Ụlọ akwụkwọ ahụ nwere ikike ịchọ ihe ọ bụla ụmụ akwụkwọ nwere ma ọ bụrụ na a na-enyo nwa akwụkwọ a anya na ya nwere ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ ihe iwu akwadoghị ma ọ bụ ihe dị n'ụlọ akwụkwọ, na njem na ọrụ. Ụmụ akwụkwọ kwenyere na ha nwere ike ịṅụ ọgwụ ọjọọ na / ma ọ bụ mmanya na-eche nsogbu ndị dị oke gụnyere nkwụsịtụ ma ọ bụ ịchụpụ.
Imebi Usoro Omume
A choro um u akw ukw o niile ka ha rube isi n'iwu omume BLI. Ọbụna mgbe mmebi ahụ enweghi ike ime ka ndị mmadụ ma ọ bụ ihe onwunwe nwee mmerụ ahụ, BLI nwere ike ịchụpụ nwa akwụkwọ nke kwụsịrị nkwusịrị n'ihi na ọ naghị erube isi na ebe ọ bụ na o mebiri ihe ọ bụla nke koodu omume BLI.
Mmegbu ma ọ bụ ịkpa ókè
BLI anaghị anabata nsogbu ma ọ bụ ịkpa ókè nke onye ọ bụla na-amụrụ ihe, onye ọrụ, onye ahịa ma ọ bụ ndị nleta na ụlọ akwụkwọ ahụ. Ụmụ akwụkwọ ndị na-etinye aka na ịkpa ókè ma ọ bụ ịkpa ókè nke agbụrụ, mmekọahụ, ma ọ bụ gbasara mmekorita nwoke na nwaanyị nwere ike ịdabere na nkwarụ ozugbo na-adabere na oke ọrụ ahụ ma na-echere nyocha. Enwere ike ịchụpụ nwa akwụkwọ ọ bụla a na-enyocha site na nyocha ahụ maka itinye aka na ịkpa ókè ma ọ bụ ịkpa ókè na ntụgharị uche nke ụlọ akwụkwọ ahụ, dabere na oke ọrụ ahụ. N'ịchọpụta ihe kpatara nsogbu ma ọ bụ ịkpa ókè, BLI na-ezo aka na Charter Quebec nke Rights na Freedoms.
Iji ihe onwunwe eme ihe
Ụmụ akwụkwọ na-emebi, na-ezu ohi ma ọ bụ n'ụzọ na-ezighị ezi, ụlọ akwụkwọ nwere ike ịchụpụ ma achọrọ iji mezuo.
Nsogbu nke ndị ọrụ ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ
BLI na-akwụ ụgwọ maka ikike nke ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ, ụmụ akwụkwọ, ndị ahịa na ndị nleta na-enwe nchebe. Ụmụ akwụkwọ ndị site na omume ma ọ bụ nleghara anya n'ụzọ ọ bụla na-etinye ihe ize ndụ na nchekwa nke onwe ha ma ọ bụ ndị ọzọ nwere ike ịchụpụ.
A ga-ezitere ụmụ akwụkwọ ndị a na-achọ ịchụpụ n'ihi ihe ọ bụla na ederede, ma ọ bụ site na email, akwụkwọ ozi enyere ma ọ bụ site na ozi ederede. BLI abụghị maka onye na-abụghị onye na-enyefe ya ma ọ bụrụ na onye akwụkwọ ahụ enyeghị adreesị ebe obibi dị mma. Akwụkwọ a ga-agụnye ihe ndabere maka ịchụpụ na ụbọchị dị irè. Ndị na-achụpụ ndị mmụta bụ ndị na-agbagha eziokwu nke ịchụpụ aghaghị ịrịọ mkpebi ahụ n'ime ụbọchị atọ nke ọkwa na-eso usoro mkpesa nke BLI nyere nwa akwụkwọ ahụ na inye nkwado zuru oke iji kwadoo mkpesa ahụ. Ụmụ akwụkwọ na-ede akwụkwọ mkpesa ma ghara ịga nke ọma na-ewere ya na ọ bụ na BLI.
Ntọala nke Ụgwọ Mmụta nke Ndị Mmụta
Ntọala nke akụkọ ụmụ akwụkwọ, maka ụmụ akwụkwọ a chụpụrụ, ga-agwụchaa n'okpuru Iwu Ụlọ Akwụkwọ nke Ụlọ Akwụkwọ, na-eji ụbọchị dị irè nke ịchụpụ dị ka ụbọchị ikpeazụ nke ịga ọmụmụ ihe ha.
Nweghachi nke Ngwongwo
A na-amụrụ akwụkwọ nke a na-achụpụ bụ ọrụ maka nlọghachite ụlọ akwụkwọ ọ bụla na ya n'onwe ya n'ime ụbọchị 10 maka ịchụpụ ya, a ga-enwekwa ego maka ihe onwunwe ọ bụla adịghị alaghachi n'ọnọdụ dị mma.